ယဉ်စည်းကမ်း တင်းကြပ်မှု စီမံချက်သတင်း | U.N.O.B
ယဉ်စည်းကမ်း တင်းကြပ်မှု စီမံချက်သတင်း
Website ပရိဿတ်များခင်ဗျား –
သြဂုတ်လ(၁)ရက်မှစ၍ ရက်ပေါင်း(၃၀)အတွင်း ဒါဏ်ငွေပေါင်း(၉)သန်းရရှိသည်အထိ အဖမ်းအဆီးများကို State Troopers လုပ်ဆောင်ကြမည်ဟုသိရပါသည်။
ကားမောင်းခရီးသွားများ ပို၍သတိထားနိုင်ရန် သတိပေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Starting Aug 1st state troopers will write tickets for5miles over the speed
The goal is to get9million in 30 days.
NO TWO August 3, 2010 at 10:06 pm Reply
very importent informations.thanks.
moses August 3, 2010 at 1:31 pm Reply
THANK’S ALOT, WE ARE DRIVING EVERY DAY’S,WE NEED TO BE SAFE.